घरकी एकमात्र बुहारी म बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन ! – Online Khabar 24
घरकी एकमात्र बुहारी म बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन !
October 15, 2021 by admin admin
‘छ्या दसैं पनि आयो है’ ल्यापटप झोलामा राख्दै प्रियाले भन्छे। ‘लौ किन छ्या नि? दसैं आउँदा खुसी लाग्या छैन तँलाई?’ अचम्म मान्दै सोध्छु।
मतिर हेर्दै नहेरी झोलाबाट मोबाइल निकालेर समय हेर्छे अनि प्रिया बोल्छे- जति खुसी हुनु बिहे नहुञ्जेल भइयो, बिहेपछिको दसैं त कहिल्यै रमाइलो लागेन मलाई। हामी उसको अफिसबाट बाहिर निस्कियौं।प्रिया एक निजी संस्थामा जागिर गर्छे। उसको आजबाट दसैं बिदा भएको थियो।
अफिस बिदा भएपछि दसैंको किनमेल गर्न सँगै जाने सल्लाह भएको थियो हाम्रो। त्यसैले म उसलाई लिन त्यहाँ गएकी थिएँ। उसको कुरा अनि निराश अनुहार देखेर किनमेल गर्न जाने मनस्थिति नै बनेन।
‘हिँड् जाऊँ त्यहाँ मिठ्ठो चटपटे पाउँछ, पहिले चटपटे खाऊँ अनि बजार जाउँला’ मैले उसको मुड फ्रेस बनाउने जमर्को गर्छु। हुन त म खासै चटपटेको पारखी होइन तर सच्चसाथीको कर्तव्य निर्वाह गर्नु थियो।’दाइ, ६० को चटपटे बनाउनु ल, पिरो कम अमिलो ट्वाक्क’ मैले कुर्सी मिलाउँदै चटपटे अर्डर गर्छु।
प्रियाले बल्ल मेरो आँखामा हेरेर बोल्न सुरू गर्छे-कहिलेकाहीँ त अफिसबाट छुट्टि भएपछि पनि यहीँ अफिसमै बसिरहुँ जस्तो लाग्छ। घरकाले त हामी अफिस आराम गर्न गएको जस्तो सोच्छन् कि क्याहो! अझ चाडवाड आएपछि त मेरो हालत के हुन्छ तँलाई थाहै होला।
उसको कुरामा सहमति जनाउँदै टाउको हल्लाउँछु। त्यसपछि उसले आफ्नो दुःखहरूको पोको बिस्तारै खोल्दै जान्छे। ‘मेरो घरको भव्य दसैं’, संयुक्त परिवारकी एकमात्र बुहारी म। घरमा जमघट हुन थालिसक्यो। काठमाडौंबाट कान्छो सासू-ससुरा छोराछोरीसहित आइसक्नुभएको छ, आफ्नो घरमा आउनै पर्‍यो दसैंमा।
घरमा रमझम सुरू भएको छ। सासूले हजुरआमा(बुढी सासू)को स्याहार गर्दा अरु काम गर्न भ्याउनु हुँदैन। कान्छी सासू पाहुना पल्टेर यो ल्याऊ त बुहारी, त्यो गर त बुहारी भन्दा ठिक्क, ससुराहरू र श्रीमान ज्यूको म्यारिजको पत्ति जम्न सुरू भइसकेको छ, साथीभाइ बोलाएर।
बेला-बेला उहाँहरूको अगाडि वेटर झैं हाजिर भइरहनु पर्छ।धन्न ट्वाइलेटसम्म आफैं जानुपर्ने बाध्यता छ, यो पनि अरूले गरिदिएर हुने थियो भने टोली त्यहाँबाट के डग्ने थियो।मोबाइलमा २०,२२ वटा मिस्डकल हुन्छन् सुत्ने बेलामा देखिन्छ। फोन उठाउने फुर्सद दसैंकी बुहारीलाईं हुँदो हो त!
दसैंको दिन बिहानदेखि हात खाली हुँदैन हामी सासू- बुहारीको। कुनै परिकार त अघिल्लो दिन नै पकाएर राख्नुपर्छ नत्र भ्याइँदैन।दसैंको दिनको कुरा सुन।कान्छी सासू बिहानैदेखि म्यासेन्जरमा दसैंको शुभकामना आदानप्रदानमा व्यस्त। पुरूष सदस्यहरू कतिबेला ‘चिया खाऊँ न एकलट अझै, कतिबेला ‘खोई अझै तयार भा’छैनौ?’ यति भन्नमात्र अगाडि पर्छन्।
यो लेख लेखिरहँदा धेरै लाइक र धेरै शेयरको भन्दा पनि पंक्तिकारलाई एउटा कुराको आश लागेको छ। त्यो हो- आफूले दसैंलाई भव्य बनाइरहँदा,आफू रमाइलो गरिरहँदा घरका अन्य सदस्यलाई कामको लोडमात्र थपिइरहेको त छैन भन्ने ख्याल सबैलाई होस्। हरेक पुरूष र हरेक महिलालाई पनि बिहेभन्दा अगाडिजस्तै बिहेपछि पनि दसैं रमाइलो गरी मनाउने अवस्था रहोस्। भव्यभन्दा पनि दसैं सभ्य होस्। सेतोपाटीबाट
Prevस्वर सुन्दा सबै छक्क परे, २० बर्षे युवतीले गरिन यस्तो काम, खोलाको ढुङ्गा बेचेर परिवार पाल्छिन (भिडियो सहित)
next८ महिनाअघि मृ,त्यु जितेका बैतडीका योगेश जन्मदिनमै अस्ताय !